बाबुरामले उपेन्द्रलाई लगाए छिर्की, जसपा दुई फ्याक हुने पक्का ! - Lekh-Patra
बाबुरामले उपेन्द्रलाई लगाए छिर्की, जसपा दुई फ्याक हुने पक्का !
काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एक कदम पछि हटेनन् भने जसपा फुट्ने निश्चित भएको छ। जसपाका बाबुराम भट्टराई पक्षीय नेताहरू यादव एक कदम पछि नहटे उनलाई कार्यकारिणी समितिको अध्यक्ष पदबाट हटाउने रणनीति छन्।
भट्टराई पक्षीय नेताहरू कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समितिमा बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर जुटाई केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन पार्टीका कार्यकारिणी अध्यक्ष यादवलाई दबाब दिने र त्यसपछि पनि उनी बैठक बोलाउन तयार नभए आफैं बैठक बोलाउने गृहकार्यमा जुटेका छन्। भट्टराई पक्षले बोलाएको बैठकमा यादवलाई कार्यकारिणी समितिको अध्यक्षबाट हटाउने योजना छ। ‘अब पार्टीलाई फुटाउने कि एकीकरणको अवस्थामा राख्ने, यो निर्णय गर्ने अधिकार उहाँ (उपेन्द्र यादव) कै हातमा छ,’ भट्टराई पक्षीय नेता तथा कार्यकारिणी समिति सदस्य प्रशान्त सिंहले भने, ‘हामी अझै पनि जसपा नफुटोस् र मेलमिलापको स्थिति रहोस् भन्ने चाहन्छौं। तर अब मिलेर जाने कि नजाने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष यादवकै हातमा छ।’
भट्टराई पक्षीय अर्का एक नेताले भने, ‘अहिले हामीले केन्द्रीय तथा कार्यकारिणी समितिका सदस्यको हस्ताक्षर रुजु गर्ने काम गरिरहेका छौं। बिहीबारसम्म हस्ताक्षर रुजु गर्छौं। शुक्रबारदेखि प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ ती नेताका अनुसार केन्द्रीय समिति र कार्यकारिणी समितिमा भट्टराई तथा वरिष्ठ नेता अशोक राई पक्ष बहमुतमा छ। ती नेताले भने, ‘अहिले अर्को पक्ष आत्तिएको छ। भट्टराई पक्षले ४० प्रतिशत संख्या जुटाउन खोज्यो भनेर उनीहरूले जबरजस्ती प्रचार गरिरहेका छन्। हामीसँग बहुमत छ। केको ४० प्रतिशत? उनीहरूले हाम्रो पक्षलाई कमजोर देखाउन खोजेका हुन्। बरु ४० प्रतिशत संख्या जुटाउन उनीहरू (यादव पक्षीय नेताहरू) लाई समस्या छ।’
बहुमत जुटाएर यादवलाई अध्यक्षबाट हटाउने भट्टराईको रणनीति हावादारी भएको यादव पक्षीय नेताहरू बताउँछन्। ‘किन कुरा मात्र गर्ने, बहमुत जुटाएर देखाउनुहोस् न?’ राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका कार्यकारिणी समिति सदस्य मिर्गेन्द्रसिंह यादवले भट्टराई पक्षलाई चुनौती दिँदै भने, ‘उहाँहरूलाई मेरो चुनौती छ। सक्नुहुन्छ भने उहाँ (उपेन्द्र यादव) लाई हटाएर देखाउनुहोस्।’
काठमाडौंको अपमान सुन्दा मेयर बालेनको मन चसक्क !
मन्त्री वलीको अन्तै चक्कर, अर्काको श्रीमानलाई आफ्नो पोई भन्दै मच्चाइन् वितण्डा !
उपेन्द्र यादव विरुद्ध जसपामा बाबुरामको ताण्डव, फुटाउनेसम्मको तयारी !
छिट्टै देउवा क्याबिनेटमा उथलपुथल, चम्किने भयो नारायणकाजी श्रेष्ठको भाग्य !